yokuqalisa >> Te knoloji
La Te knoloji kubandakanya amasimi abanzi kakhulu. Siqhele ukudibanisa itekhnoloji yomthengi.
Kodwa itekhnoloji ayipheli ngefowuni ephathekayo, ukuba ufuna enye into, Itekhnoloji enxulumene nesayensi, Itekhnoloji ye-aerospace, kubandakanya ubunjineli kunye ne-nanotechnology, sifuna ukukunika ezona ndaba zinomdla.
Kukho iindaba zesayensi kunye netekhnoloji engakholelekiyo kangangokuba kubonakala ngathi yintsomi. Iindaba nganye ziyamangalisa imihla ngemihla. Uya kude kangakanani umntu xa kufikwa kumthetho wokuthambisa?
Rhoqo kuvela izinto ezintsha ezineempawu ezizodwa, I-Nanotechnology ifikelele kwinqanaba lokuphuhliswa kangangokuba yenza kube lula ukuvelisa ii-nanomachines ezihamba ngaphakathi emzimbeni womntu.
Indawo kunye nomdyarho wobuchwephesha ngaphandle kokufumana uhlahlo-lwabiwo mali lwamaxesha angaphambili ziyaqhubeka nokukhula kwaye siyabona inqwaba yezifundo kunye nenkqubela phambili kwezobuchwephesha esinokuthi emva koko siyisebenzise kule mihla yethu.
Bubuphi ubuchule obusiphathele ikamva? Iirobhothi, ziphantse zaneempawu zobuntu, zivumela amakhulu abantu ukuba benze umsebenzi kunye nabathengi ngombane, izixhobo, izinto zokunxiba, kunye nesoftware esivumela ukuba senze imisebenzi engenakucingwa, engenakucingwa kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Iinkampani ezinkulu zetekhnoloji aziyeki ukufumana iinkampani, zizomeleza ngeenxa zonke zetekhnoloji yomelele kwaye yaphucula i-nuclei.
UGoogle ubonakala engomnye wabadlali abakhulu bale nkulungwane.
Ukusuka eTecnoloblog siza kulandela zonke iindaba ezifanelekileyo ezivela kwihlabathi lobuchwephesha kwaye sinike ingxelo ngendlela engqongqo kakhulu.
Siyathemba ukuba akuzukubakho isidima esikhulu kwaye ukuba ubuchwepheshe obutsha busetyenziselwa ukuphucula ubuntu kunye nomgangatho wobomi kwaye hayi njengezixhobo okanye iindlela zokwenza inzuzo ngalo naliphi na ixabiso.
Ukuma kwekhadi yenqaku
Nangona iindlela ezininzi zibonwe ukuza kuthi ga ngoku, ezinje nge iJIT, zivela kushishino lweemoto, ayizizo zonke ezivela kweli candelo. Abanye benze igalelo elikhulu kwishishini, njenge semiconductor kunye ne-CMI (Ibhalibhodi elinganisiweyo) okanye i-BSC (iBalance Scoreboard) ngesiNgesi.
Enye imodeli yolawulo ekhokela isicwangciso-qhinga ngokubhekisele kuthotho lwe iinjongo ezinxulumene nganye. Eyona njongo iphambili yale modeli kukuphumeza kunye nokunxibelelana ngesicwangciso esiza kulandelwa kuyo yonke inkampani, nokuba yezoqoqosho / yezemali, yophuhliso, yeenkqubo, njl.
Iinkampani zifuna iinkqubo ezilula ezivumela ukuba zisebenze ngokufanelekileyo kwaye zikhawuleze zilawule imisebenzi ukusukela kwimisebenzi yeshishini lokuvelisa, izinto zokusebenza, izixhobo, uluhlu lwezinto, accounting, ukulawula abathengi bazo, njl. Ukwenza oku, kungcono ukusebenzisa Iinkqubo ze-ERP, oko kukuthi, isoftware yemodyuli esebenzisa lonke olu hlobo lwezixhobo kwiinkampani nakwimibutho.
Ngolu hlobo lwesoftware, awuzenzeli kuphela kwaye ulungelelanise ukwenziwa kwale datha malunga nenkampani, uvumela yonke idatha ukuba idityaniswe, ibekwe embindini kwaye idityaniswe komnye nomnye. ukwenza uhlalutyo kulula kakhulu. Nangona kunjalo, ukuze isebenze kakuhle, eyona nkqubo ifanelekileyo ye-ERP kufuneka ikhethwe, kuba ayizizo zonke iinkampani kunye nobukhulu obufuna uhlobo olufanayo lwesoftware ...
Umzi mveliso 4.0
La imboni 4.0 Yiparadigm entsha yemizi-mveliso ejolise ekuhlaziyeni umzi mveliso njengoko usazi ngoku. Sele iphunyezwa kwiinkampani ezininzi zangoku, kwaye kujongwe kuyo kancinane ukufudukela kwezinye iinkampani. Ngale ndlela, inguqu epheleleyo yedijithali iyakwenziwa kwimizi-mveliso nakwiinkampani ezikrelekrele ngakumbi, ezifanelekileyo nezisebenzayo.
Ukuthatha le ndlela usiya kwishishini 4.0 lithuba elihle lokuphucula inkampani yakho, Thatha ithuba kuzo zonke iitekhnoloji ezintsha kwaye, ekugqibeleni, sidale ishishini elinamandla ngakumbi, elisebenzayo nelizuzayo xa kuthelekiswa nomzi mveliso oqhelekileyo.
La umbono ongeyonyani okanye umbono wekhompyuter Yindlela enokusetyenziselwa ubuninzi bezicelo ngaphandle nangaphakathi kumzi mveliso. Ivumela ukuqonda imifanekiso, ukuqhubekeka ulwazi, ukuhlalutya kunye nokuvelisa uthotho lwezenzo ngokusekwe kwidatha esele ichaziwe. Kwaye banokuyenza ngendlela efanelekileyo ngakumbi kunabantu, kuba unika oomatshini amandla amakhulu okuqonda nokutolika imifanekiso yendalo esingqongileyo abayibonayo.
Ngokuqhubela phambili I-AI (Ubukrelekrele bobugcisa), kuye kwenzeka ukuba kuphuculwe kakhulu ezi ndlela zobugcisa bokufakelwa ukufezekisa izinto ezazingacingeki kude kube ngoku. Ukongeza, ubuchule bokubonisa bokufakelwa bunokusetyenziswa kwi-in-situ ngaxeshanye, okanye uhlalutye imifanekiso okanye iividiyo esele zirekhodiwe. Kukho umba we-3D wolu hlobo lombono onika amandla amatsha okulinganisa umbono wabantu ngekhompyuter.
Omnye umsiki weplasma Ngumatshini okanye isixhobo esikwaziyo ukusika iinxalenye zesinyithi kuzo zonke iintlobo kumaqondo obushushu aphezulu anokufikelela ngaphezulu kwe-20.000ºC. Izitshixo zokusika ngokulula isinyithi, nditsho ubukhulu obukhulu, ngale nkqubo kukuba amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, iipropathi zeplasma (imeko apho igesi iziswa yi-arc yombane), kunye nokwahlulahlula.
Kwimeko yeplasma, loo gesi iqhuba yombane oza kutsalwa ngombane. Ukuba idluliswe ngemilomo yetotshi entle kakhulu, inokujoliswa ngqo ngqo apho ufuna ukusika khona. Ngamanye amagama, enkosi kubushushu obuphezulu (obuveliswe yi-arc yombane yangoku ethe ngqo) kwaye ngokugxininisa amandla e-kinetic ale gesi, inokusikwa ngokulula ngokuchaneka okukhulu.
Mhlawumbi enye yeenkqubo zokusika ezimangalisayo ezikhoyo. Kwaye kungenxa yokulula kwayo, kodwa amandla ayo agqithisileyo. Njengoko igama layo libonisa, kuphela ngamanzi asetyenziselwa ukusika zonke iintlobo zezinto, nkqu nesinyithi.
Njengokusika iplasma ezo jets zeplasma zisetyenziselwa ukusika, kule meko ziyasetyenziswa Ijethi zamanzi eziphezulu kakhulu zokusika. Kolo xinzelelo kunye nesantya, iimolekyuli zamanzi zii-projectiles ezinefuthe kwaye ngokulula zidlula kwizinto eziza kusikwa.
El i-oxyfuel yindlela Ixhaphake kakhulu kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini, ngakumbi kumalungiselelo emiphetho yamaqhekeza ukuze iwelding kamva, kunye nokusika iinxalenye zesinyithi ngobukhulu obukhulu (zihlala ziyintsimbi okanye ezinye izinto zentsimbi). Ubungqindilili obuphathwa kwi-oxyfuel abufanelanga ukusikwa kusetyenziswa iisarha zeradial okanye iitotshi eziqhelekileyo.
Igama layo libangelwa yinto yokuba ukusika kwenziwa ngeoksijini ngedangatye. Irhasi isebenza njengerhasi enokutsha kwilangatye (propane, acetylene, hydrogen, tretene, crylene, ...) kwaye enye igesi iya kusebenza njenge-oxidizer (ihlala ioksijini).
NGUMATTHEW F HILL
Yintoni ukuzalwa ngokutsha
La ukuzalwa ngokutsha Yinkqubo apho amandla ombane kunye nobushushu anokufumaneka ngaxeshanye. Oko kuyenza ukuba ibe yenye indlela efanelekileyo yokunikezelwa kwamandla kwimisebenzi efana nejoni.
Xa kuthelekiswa nomvelisi olula amandla oomatshini kunye nobushushu okanye amandla ombane, Kuvelisi wokuvelisa zombini ziyafezekiswa kwaye ubushushu obuvelisiweyo busetyenziswa ngaphambi kokuba budluliselwe kwindalo esingqongileyo. Iyafana kwi-MGU-H yeFomula 1, okanye kwiinkqubo ezithile zokubuyisa amandla ezifana ne-turbo, njl.
Iintambo zombane eziqhuba nezigcina umbane
UJayan Thomas, uprofesa kwiziko lobuChwepheshe beNanoscience kwiYunivesithi yaseFlorida, bacinge ukuba kunganomdla ukufumana iintambo zombane zobhedu esiyisebenzisayo ngoku ukongeza ekuqhubeni umbane wevenkile.
Ke yena noZenan Yu bafuna ukuzama ukuba bangayifumana na. Izicelo zinokungakholeki, zenza amalaphu anokuthi azinike amandla izixhobo zethu njengoko uTomas esitsho, kodwa ngaphezulu kwako konke ucinge ukuba izigidi zeekhilomitha zentambo kwihlabathi liphela zinokusetyenziselwa ukugcina amandla kunye nokulawula iintlambo kunye neencopho zombane .
UThomas kunye neqela lakhe bebesebenza kwi ubuchule obuncinci bokushicilela bokwenza ii-supercapacitors ukusuka kwii-nanoelectrode ezi-odolwe.
Ukufezekisa injongo yabo yokuba iintambo zombane ziyakwazi ukuqhuba kunye nokugcina umbane ngaxeshanye, baqhubekile ngomgca wophando wee-supercapacitors.